Intlambo yaseHadjios - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCostas
Inkcubeko yesiNtu, ububele obuphezulu kunye nomoya ozolileyo zonke ziye zadibana eHadjios Valley kwilali yaseMazotos, eSipro, ebekwe kwindawo efanelekileyo kwi-15km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseLarnaca kunye ne-2km kuphela ukusuka elunxwemeni lwaseMazotos.
Ibha edlamkileyo yesnack, iphuli yangaphandle kunye nejim efanelekileyo ebekwe phakathi kwamawaka eminquma, iorenji kunye nemithi yelamuni kunye nokuchukumisa okokugqibela kule lali yeholide, emele eyona ndawo yokuya izibini kunye neentsapho.
IHadjios Valley ifanelekile kwiintsapho kunye nezibini ezinomdla wokuhlola isiqithi sonke saseSipro. Onke amagumbi amabini eevillas aqhagamsheleneyo abanzi kwaye anokuhlala abantu abahlanu. Zonke iivillas ezinomoya eHadjios Valley zineekhitshi ezixhotyiswe ngokupheleleyo ezinezixhobo zombane, izitya, izinxibo zeglasi kunye nempahla. Ukongeza, zonke iipropathi zibandakanya intsimbi, ibhodi yentsimbi, isomisi seenwele kunye nomatshini wokuhlamba ukuze kube lula kuwe.
Isantya esiphezulu seWi-Fi sasimahla sikwafumaneka kuyo yonke iHadjios Valley.
I-Mazotos inika ithuba elikhethekileyo lokuva inkcubeko yelali yaseCypriot yemveli apho abantu bakhona baphakathi kwabona banobubele kwesi siqithi. IHadjios Valley ibekwe kwindawo efanelekileyo ukuze iindwendwe zikwazi ukutyelela ezinye iidolophu nezixeko ezidumileyo. Umbindi welali kukuhambo olufutshane ukusuka eHadjios Valley, apho unokuthenga imveliso yasekhaya entsha kwiivenkile ezizimeleyo ezizimeleyo. Kwimizuzu nje embalwa uhamba ukusuka kwiivillas uya kufumana iicawe, iivenkile zekofu, iithaveni zasekhaya kunye nemyuziyam. Ibhanki yentsebenziswano yasekuhlaleni ikwame kufutshane neHadjios Valley indawo yemali yangaphandle. Kukho iintlobo ngeentlobo zeelwandle kumgama omfutshane kuphela obonelela ngemidlalo yamanzi, iivenkile zokutyela kunye nemivalo esecaleni elunxwemeni. Kwimizuzu nje embalwa ukusuka eHadjios Valley yindawo eyaziwayo 'yeMazotos Camel Park' olu lusuku oluhle kulo lonke usapho.
Umbuki zindwendwe ngu- Costas
Abasebenzi bayafumaneka kwindawo yokunceda ngezicelo zeendwendwe. Ngaphaya koko, iindwendwe zinikwa inombolo yeselula yabaniniyo ukuba ziqhagamshelane ngokuthe ngqo xa zifunwa.